External 3DBI Stubby GSM Antenna factory and manufacturers | Ms Telecom
Product Details 1. Product Name: External 3DBI Stubby GSM Antenna 2. Description Applications : 900MHz ISM Band Cellular Band Applications 900MHz Digital Spread Spectrum Radios 900MHz Telemetry Products LoRA, IoT, M2M applications Features : Weight is light Installed for vertical or horizontal polarization RoHS compliant 3. Introduction GSM 3dbi antenna 30%+ Efficiency Dimensions SMA Connector This high performance GSM (900/1800MHz) omnidirectional “rubber-d...
30% + အသုံးအရွယ်အစား
bandwidth (MHz) 136/200
အမြတ် (dBi) 3
antenna Dimension-မီလီမီတာ (mm) 210 * 14
အမျိုးအစားချိတ်ဆက်ပါ SMA အထီးသို့မဟုတ် RP SMA အထီး
rated လေနှုန်း 60 km / h
Cable ကိုအရှည် -mm 0
က MS Telecom Co. , Ltd မှတရုတ်အတွက်ပြင်ပ 3dbi ပေးသော Stubby GSM အင်တင်နာ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့်ကိရိယာများနှင့်ပညာရှင်များ၏အကူအညီနှင့်အတူကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ခိုင်ခံ့သောကြာရှည်ခံမှုနှင့်အတူဖောက်သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအင်တင်နာထောက်ပံ့နိုင်ကြသည်။ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းမှာတရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ်လက္ကားကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မှစိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေပါ။
ယခင်: Omni Directional Quad Band GSM/GPRS & 2G 3G Whip Antenna
နောက်တစ်ခု: Portable DAB DAB+ Active Stereo Radio Antenna
Sma Connector နှင့်အတူ GSM အင်တင်နာ
Sma အမျိုးသား Connector နှင့်အတူ GSM အင်တင်နာ
GSM Helical အင်တင်နာ
Helical GSM Dcs အင်တင်နာ